Waan Nahay Isku Hal Naf | Doodwadaag waa Danwadaag.
Waxaa jirta Ruux wadareed si wada jir ah loo wadaago, oo dhammaan bulshada ka dhaxaysa. Ruuxda (Nafsadda) qofka ku jirta ee sida gaarka ah uu u leeyahay, waxay u baahantahay inay ku xirnaato oo ka shidaal qaadato, Ruuxda guud ee bulshada ka dhaxaysa. Si aan aad u muuqan oo aan la dareemi Karin ayay ruuxda bulshadu isu ursataa oo u kala shidaal qaadataa. Haddii si kale loo dhaho, dhaqdhaqaaqa mawjadaha hawada ee aan ku neefsanno ayaa ah, shabakadda bulshadu nolosha ku wadaagto, oo ay tamarta isugu gudbiyaan.
Arrinkaan, wuxuu ka mid yahay, garashoonyinka cusub ee dhawaan kaydka aqoonta aadanaha ku soo biiray. Inkasta, oo tilmaamo qarsoon diinta looga heli karo, haddana ma aha fikrad si wayn loo shaaciyay ama loo fahmay.
Tusaale ahaan: Haddii aad caruur Soomaali ah ka kaxayso, waddankooda iyo dadkooda, oo aad geeso, waddan kale, oo cilmiga iyo coodkaba Soomaali ka badan, waxaad arkaysaa in caruurtii rafaadeen oo ay hoos u socdaan. Xagga caafimaadka, maskaxda, ruuxda iyo firfircoonaanta, intaba inay dhib ku qabaan ayaad arkaysaa. Haddii aad dadaasho, oo aad Diinta iyo luqada barto kuma filna, inay buuxiyaan, baahidii wahelka ruuxda bulshada. Ma aha caruuta kaliya, ee xattaa dadka waawayn, dhitaasi way gaaraysaa. Mana aha Soomaali kaliya. Soomaalida tusaale ayaan ka dhigay, ee dhammaan aadanaha oo dhan. Taas waxaa loo daliil sadaa inay jirto Ruux wadareed- aan aad u muuqan oo la wadaago.
Guud ahaan waxaa jirta aragti ku doodaysa, inaysan jirin kala soocaan dhab ah, ee xagga ruuxda dadka oo dhan iyo waliba dabeecadda dhulka. Haddana, waxaa aad u xoog badan oo ah qayb qofka ruuxdiisa ka mid ah, bulshada uu ka dhashay iyo waddanka uu ka tirsan yahay. Qof kasta oo ku koray ama kunnool, meel dadkiisii ka fog, waxaa ku jira, curyaan-nimo xagga ruuxda iyo maskaxda ah, taas oo aysan kabi Karin wax kasta oo lagu qaan dhabo. Marka, waxaa la orankaraa, waxaa jirta Nafsad-wadareed, sida ay u jirto, nafsad qof walba gaar u ah.
Tilmaamaha laga dheehan karo cilmigaas Nafsad-wadareedka ah, waxaa ka mid ah, aayaddaan Quraanka kariimka ah: “وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيماً” (Naftiinna haddilinnina, Alle waa kii inii naxariista) Sida ayaadda ka muuqata, naftiinna haddilinina waxaa loola jeedaa, dadka kale haddilin. Haddii aad dadka kale disho, waxay lamid tahay, adiga oo isdilay. Markii aan islaynaynay, oo dhagaalka isku qaad-qaadnay, waxaan u moodaynay, inaan qabiil kale iyo dad kale oo shisheeye ah, aan dilayno; Illayn innaga ayaa nafteennii iyo sharafteennii dilaynay.
Sh Cabdiraxmaan M. Jibriil